Waxbarashada dibadda
Jaamacadda Swedish ka badankood heshiisyo ayaa waxay la leeyihiin jaamacaddo shisheeye ee laga qaato barnaamijyo kala duwan ee waxbarasho. Inta aad ku guddi jirto waxbarashadaada dibadda ayaa waxaa loo qiimeeyaa in ay tahay adiga oo ku jira barnaamikaaga Swedish ka oo buundada ay ku siiyaan jaamacaddahaasi waa laguu xisaabayaa marka aad soo laabato.
Si aad uga qaybqaadato barnaamijka waxbarashada dibadda, waa in laguu oggolaadaa jaamacad Swedish ah ama kulliyada jaamacad oo, badanaaba, waa in aad Sweden dhexdheeda ku dhammaysaa oo aad haysataa tiro buundooyin ah inta aadan u ambabixin waxbarashadaada wadan kale.
Ardayda waxay isticmaali karaan deeqda la siiyay iyo daynta ay ka heleen CSN in ay dibadda wax ku soo bartaan. Inta badan, ardayda ayaa sidoo kale xaq u yeesha in ay helaan deeq-waxbarasho oo dheeraad ah. Waa in aad ula xiriirtaa isuduwaha caalamiga oo jaamacaddaada jooga si aad wax badan uga oggaato. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashada dibadda ayaa waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee studera.nu.
Barnaamijyada ardayda la isdhaafsado ee ugu wayn ayaa waxaa loogu yeeraa Erasmus+, waa barnaamijka waxbarashda Middowga Yurub ee Yurub dhexdeeda ah. Erasmus+ waxay ardayda ay siisaa fursaddo ay 3 - 12 bilood ay wax ku soo bartaan jaamacad ku taala wadanka kale oo Yurub ku yaala. Ardayda Erasmus ma bixiyaan qarashka waxbarashada ku baxa oo deeq-waxbarasho ayaya helaan oo ah 315 ama 375 oo euro ah bishiiba. Ardayda Erasmus+ waxay baran karaan shahaadada koowaad ee jaamacad, maastaradka ama heer shahaada ugu sareysa.
Wax badan oo ku saabsan barnaamijka Erasmus+ waxaad ka oggaan kartaa studera.nu.